Apple Fitness + wuxuu isku daraa Pilates -ka cusub iyo jimicsiga Meditation | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 27/09/2021 20:00 | Noticias, Alaabada Apple
Apple ayaa ku dhawaaqday -diridda bartamihii Sebtembar wararka ku saabsan jimicsigeeda dalwaddu, Apple Fitness +. Mid ka mid ah waxyaabaha ugub ku ah waxay ahayd ballaarinta adeegga dalal badan, oo ay ku jirto Spain, dhammaadka sannadka. Intaa waxaa dheer, waxay ku dhawaaqeen isboorti cusub si loo soo bandhigo jimicsiyada sida Pilates ama Meditation Medi. Dhinaca kale, waxay isku darsadeen sheekooyinka cusub ee macruufka 15 iyo iPadOS 15 iyagoo bixinaya ikhtiyaarka tababarka illaa 32 qof oo isticmaalaya SharePlay. Maanta waxaan ognahay in qaar ka mid ah wararkaan durba laga heli karo Apple Fitness + si rasmi ah.
Apple Fitness + waxaa lagu cusboonaysiiyaa wararka la soo bandhigay Sebtember 14
Waxyaabaha cusub ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah Tababbarka Meditation ee Hanuunsan. Kuwani waa jimicsiyo soconaya inta u dhaxaysa 10 iyo 20 daqiiqo oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu 'yareeyo walbahaarka maalinlaha ah iyo inuu yeesho dareen weyn oo wacyigelin ah iyo inuu dhiso adkeysiga si uu ula kulmo caqabadaha nolosha'. Iyada oo ku saleysan kuliyadda nafsaaniga ah ee Mindfulness oo aad caan u ahayd bilihii la soo dhaafay. Jimicsiyadaan hadda waxaa laga heli karaa Apple Fitness +.
Dhexdhexaadinta Hanuunsan. Maskaxdaada u fur fekerka. Soo Bandhigida Meditations Hanuunsan, hab aad u faa'iido badan oo lagu barto miyir-qabka iyo hagaajinta fayoobaantaada guud. Kalfadhi kasta wuxuu u heellan yahay mowduuc, sida nabadda gudaha, mahadnaqa, ama naxariista, iyo xirfadlayaasha Fitness + waxay kugu hagaan tallaabo tallaabo. Waxaad ka daawan kartaa fadhiyada iPhone -kaaga, iPad -ka iyo Apple TV, oo xitaa ka dhegayso Apple Watch -kaaga mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto.
Sidoo kale Jimicsiyada Pilates ayaa lagu daray Waxaa hogaaminaya macalimiinta Marimba Gold-Watts iyo Darryl Whiting. Tababarkan wuxuu horumarin doonaa xoogga iyo dabacsanaanta isticmaaleyaasha wuxuuna ku biirayaa tabobarrada kale ee saameynta yar sida Yoga ama Core. Ugu dambeyntiina, jimicsiyo cusub ayaa lagu daray oo loogu talagalay caqabado gaar ah sida kii lagu dhawaaqay inuu agaasime ka yahay Ted Ligety u diyaargarow isboortiga jiilaalka.
Apple Fitness + waxay bixisaa taxane jimicsi oo loogu talagalay caqabado gaar ah ama heerar kala duwan oo nolosha ah. Mid kastaa wuxuu caado u yahay inuu ka shaqeeyo oo xoojiyo jirka ku salaysan yoolka aasaasiga ah. Kuwani waa barnaamijyadii ugu dambeeyay ee imanaya: mid kuu diyaarinaya xilliga barafka oo uu kula jiro billad -hayaha Olombikada Ted Ligety iyo mid kale si aad u barato ku -dhaqanka fekerka.
In kasta oo Apple Fitness + ay timaaddo Spain dhammaadka sannadka, hadda waa inaan degnaa oo keliya daawashada wararka ee imanaya adeegga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Fitness + wuxuu isku daraa Pilates -ka cusub iyo jimicsiga Meditation
Facebook ayaa joojisay furitaanka Instagram Kids